Kaararka warbixinta simistarka koowaad ee hadda la heli karo | Faahfaahinta Wararka Degmada
Kaararka warbixinta semesterka hadda waa la heli karaa
Kaararka warbixinta ee simistarka 1-aad waxaa loo heli karaa qoysaska si elektaroonig ah iyada oo loo marayo Skyward 3 galabnimo Jimcaha, Febraayo 5. Haddii aad su'aalo ka qabtid kaararka warbixinta, ama aad u baahan tahay nuqul daabacan oo kaarka warbixinta ilmahaaga ah, fadlan wac xafiiska weyn.
Sida Loo Helo Kaararka Warbixinta ee Skyward
Si aad u hesho Skyward, guji xiriiriyahan: Skyward Family Access
Waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato username-kaaga Skyward oo aad gasho si aad u hesho degelkan. Haddii aadan haysan taada, fadlan wac xafiiska weyn.
Guji tabka Kaarka Warbixinta / Xayeysiisyada dhanka bidix.
Liiska warbixinnada, raadi oo guji "2020-2021 Semester 1 Report Card".
Xusuusin ku saabsan Takhasusayaasha Dugsiga Hoose iyo Shahaadaynta
Fadlan haka welwelin haddii magaca macallimiinta fasalkaaga uusan ka muuqan kaarka warbixinta. Cilad farsamo ayaa ka jirtay nidaamkaas oo si khaldan u aqoonsaday macallimiinta qaarkood. Hubso in buundooyinka dhabta ah ee kaarka warbixinta ay sax yihiin oo uu soo gudbiyay macalinka ilmahaaga.
Ardayda dugsiga hoose ma heli doonaan buundooyin ay ka mid yihiin farshaxanka, warbaahinta, muusigga iyo jimicsiga jimicsiga 1-aad sababo la xiriira saamaynta cudurka faafa ee COVID-19. Macallimiinteenna takhasuska leh ayaan awoodin inay si caddaalad ah uga soo ururiyaan caddeynta barashada dhammaan ardayda sababo la xiriira jadwalka gaarka ah iyo qaababka kala duwan ee bixinta waxbarista inta lagu jiro sannad-dugsiyeedkan gaarka ah. Farshaxankeena, warbaahinta, muusikada iyo barashada jimicsiga ayaa diirada saaray dareenkooda inta lagu gudajiray Semester 1 si ardayda looga qeyb galiyo khibrado macno leh, waxayna si cajiib ah u abuureen ugana faa iideysanayeen iyagoo sidaas sameynaya qaab barasho toos ah iyo qaab isku dhafan.
Qiimeynta kaararka warbixinta waa howl adag waqtiga ugu fiican, iyo kakanaanta waxbarashada ee aafada adduunka ayaa ku soo kordhisay qaar ka mid ah caqabadahaas. Macallimiinteennu waxay sameeyeen intii karaankooda ah inay soo uruuriyaan oo ay falanqeeyaan caddaynta barashada ardayga iyagoo la jaanqaadaya duruufaha cusub ee waxbarasho una soo gudbinaya qaab raac raacaya hagidda Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ee "ha wax yeelin."
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaad fursad u heli doontaa inaad kala hadasho kaararka warbixinta ardayda, horumarka, iyo waxqabadka macallimiinta carruurtaada inta lagu jiro shirarka xilliga qaboobaha.
Wax badan ka baro kaararka warbixinta iyo nidaamka qiimeyntayada